WAR DEG DEG AH: Dab xoogan Oo ka kacay Xafad kamida Muqdisho khasaare dhimasho Oo ka dhalatay — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA WAR DEG DEG AH: Dab xoogan Oo ka kacay Xafad kamida Muqdisho...
WAR DEG DEG AH: Dab xoogan Oo ka kacay Xafad kamida Muqdisho khasaare dhimasho Oo ka dhalatay
Muqdisho (CaasimmadaTimes)-Inta la xaqiijiyay 2-caruur ah oo wada dhalatay ayaa ku geeriyootay dab xooggan oo ka kacay Degmada Warta-nabadda gaar ahaan Suuqii hore ee Balka ee degmada Warta-nabadda EX Wardhiigley.
Dabka ayaa ku biloowday sida la sheegay markii mid ka mid ah caruurta geeriyootay uu Jente-Siigar ku qabtay joodari uu ku jiifay kaas oo uu xakamayn waayay markii dambana uu dabku sii xoogeystay ilmihii yaraana ay hoos galeen Sariir tiilay qolka dabku qabsaday.
Gaadiidka Deb-damiska oo oo daqiiqado ka dib tegay goobta ayaa la tacaalaya damintiisa,dhinaca kalana waxaa lagu guda jiraa baadi goobka ilmo yar oo la la’yahay loona maleynayo in uu ku jiro mid ka mid ah guryaha gubtay.
Dad goobjoogayaal ah oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa sheegay ilmaha geeriyooday ay ahaayeen kuwa ka soo jeeda hal qoys waxaase ay sheegeen in ay iyana xoolo ku wax yeeloobeen debkaas welina lala tacaalayo.
Wixii warara Oo ku soo kordha waan idin la socodsiin doona isha allaah
Previous articleXog: Marxuum Yariisow Oo lagu wado in loogu magacdaro Xarun Caan ah….
Next articleDF oo si rasmi u shaacisay natiijada baaritaanka qaraxii xarunta gobolka iyo dad loo qab qabtay(Aqriso)
DEG DEG:Dhaawaca Guddoomiyaha Gobolka Banaadir & Xubno kale oo dibada loo...
Warbaahinta Madaxa banaan ee Puntland oo loo diiday ine soo tebiyaan...